Fillet digaag ee CBD? Karinta Xashiishad Iyadoo Kariyaha TV-ga Jasper Gottlieb • Dawooyinka Inc.eu
Cuntada digaaga ee CBD? Karinta cannabis leh TV-ga Jasper Gottlieb
Barnaamijka Iska dubi AD waxay ka koobantahay lix dhacdo oo ku saabsan cunto karinta xashiishadda. Barnaamijkani ma aha mid ku saabsan sare, laakiin waxa ku saabsan saamaynta togan CBD en THC waxay saameyn ku yeelan kartaa caafimaadkaaga. Qeybta ugu horreysa ee lala yeesho soo-jeediyaha Jasper Gottlieb - oo laga yaqaan 24kitchen - aasaaska ayaa laga wada hadlay: subagga weed.
1 Karinta xashiishka
2 Dhammaan Holland waa bakayle
3 Cuntada digaaga ee CBD
Cannabis iyo coke mararka qaarkood waxaa lagu sheegaa isku neef, laakiin xashiishka iyo karinta? Haddana karinta xashiishku waa iska baxday sannadihii la soo dhaafay. Weli wey yara tahay xaaraan, laakiin maxaad qiiq u shidanaysaa, u cuni kartaa cbd ama saliida xashiishka oo aad u cuni kartaa keega booska ah, laakiin adigu naftaada ha u diyaarin suxuunta dhadhan fiican leh dahabka cagaaran. Taasi waa dabcan qalloocan. Gaar ahaan markay tahay cawska dawada, ayuu yidhi kuugga TV-ga Jasper Gottlieb. Markii la i weydiiyay taxanahan waxaan ku fikiray: waa maxay wax aan micno lahayn, taas ma taageeri karo. Laakiin markii aan ogaaday inay ahayd marijuana caafimaad, waxaan moodayay inay xiiso leedahay. Waxaan sidoo kale helay fikradda ah inaan sidan sameeyo, si aan u eego aragti furan oo wanaagsan oo ku saabsan sida haramaha sidan loogu isticmaali karo
Dhammaan Holland waa bakayle
Waxay u egtahay wax uun sidii dubista oo dhan Holland, laakiin marijuana caafimaad. Qeybtii ugu horreysay ee 'Bakista Bakista', Jasper wuxuu ka hadlayaa aasaaska dhammaan cuntooyinka xashiishka: subagga xashiishka. Kaliya maaha diyaarinta in la muujiyey, laakiin saameynta noocyada kala duwan ee xashiishka ayaa sidoo kale si hodan ah looga hadlay. Iyada oo taxane ah, Jasper wuxuu isku dayayaa inuu jebiyo tabnaanta ku saabsan xashiishadda daawada. "Waxay u muuqataa wax yar oo caddayn ah, laakiin xashiishku wuxuu leeyahay saameyn badan oo wanaagsan, tusaale ahaan dadka qaba xanuun joogto ah oo ku dhaca laabotooyinka ama MS," ayuu Gottlieb u sheegay AD. cilmi baaris yar ayaa lagu sameeyay saameynta. Mareykanka dhexdiisa aad ayey uga sii dheer yihiin intaas.
Cuntada digaaga ee CBD
Isticmaalka saliida CBD waxay noqotay mid si aad ah caan u noqotay sanadihii la soo dhaafay. Tani maahan wax la yaab leh marka la eego in sheekooyinka guusha ee 'isticmaaleyaasha' ay badan yihiin. CBD iyo xashiishka caafimaadka waxay hodan ka dhigayaan nolosha tobanaan kun oo qof oo Nederland ah. Saliida CBD sidoo kale gabi ahaanba waa sharci waxaana laga heli karaa khaanadaha farmashiyaha. Waa maxay sababta aanad ugu isticmaalin dawadan mucjisada ah suxuunta macaan? Suxuunta taxanaha AD si xoog leh looma jeedin in daanyeer la dhagxiyo. Waxaan isticmaalnaa tiro yar. Ma waxaad dooneysaa inaad shaqo tagto adigoo dhagax lagu dilay. Saliida CBD daawo ma ahan, ma daaweyn doonto hernia-kaaga. Waxay xaqiijineysaa inaad si fiican ula tacaali karto xanuunka. Waxaan sidoo kale dooneynaa inaan kala qaadno dooda ku saabsan saliida CBD iyo saameynteeda. Mawduuca hadda wuxuu ku jiraa geeska madow.
cannabisCBDsaliid cbdcaafimaadkasaliida cannabis
John Legend wuxuu maal gashaa CBD oo wuxuu isu yiraahdaa rumeeye
John Legend waa shaqsigii ugu dambeeyay ee caan ka ah maalgashiga warshadaha xashiishka. Sida laga soo xigtay Billboard, John Legend wuxuu shaqeeyaa ...
Dukaamada casriga ah iyo jumladlayaasha waxsoosaarka caqliga leh oo cadaadis ka haysto Cadaaladda
"Kahortaga iyo ladagaalanka tahriibinta maandooriyaha waxay leedahay dareenkeyga weyn," ayaa lagu yiri warqad from
Microdosing oo marijuana ah: Faa'iidooyinka 3 iyo talooyinka 5
Tiro sii kordheysa oo u ololeeya xashiishka ayaa riixaya in la yareeyo isticmaalka iyada oo loo marayo qashinka.